काठमाडौंबाहिर सांसद गगन थापा अलपत्र, अब विश्वासको मत के हुन्छ ? — SuchanaKendra.Com
काठमाडौंबाहिर सांसद गगन थापा अलपत्र, अब विश्वासको मत के हुन्छ ?
सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७८/४/३ गते
काठमाडौं प्रतिनिधिसभा बैठकमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने दिन नेपाली कांग्रेसका चर्चित युवा नेता गगनकुमार थापा काठमाडौंबाहिर अलपत्र परेका छन् । विगत २ दिनदेखि पोखरामा रहेका नेता थापा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने थाहा पाएपछि स्थलमार्गबाट काठमाडौं जान लागेका थिए । तर तनहुँको दमौलीभन्दा अगाडि पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि नेता थापा अलपत्र परेका छन् ।
पूर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद थापालाई हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याउने तयारी भइरहेको छ । सांसद थापासँगै पूर्वमन्त्री यज्ञबहादुर थापा समेत रहेका छन् । सांसद थापा पोखराबाट आईतबार बिहान ११ बजे काठमाडौं फर्किने तयारीमा रहेपनि मौसम खराबीका कारण उनले स्थलमार्ग प्रयोग गरेका थिए । तर स्थलमार्गमा समेत पहिरोले अवरोध गरेको छ ।सांसद थापालाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याएर विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेपनि मौसमले कस्तो साथ दिन्छ भनेर परीक्षण भइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता रामजी कुँवरको स्मृतिसभा तथा पार्टीको विभिन्न कामका लागि सांसद थापा शनिवार बिहान पोखरा पुगेका थिए । काठमाडौंमा राजनीतिक सरगर्मी बढेका बेला सांसद थापा भने काठमाडौंबाहिर अलपत्र परेका छन्